မြန်မာမြေလုပွဲ - Global Ground Media
မြေယာမဲ့များကို မြေယာ ပြန်ပေးမည်လား သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြု့ပ်နှံသူများအတွက် နောက်ကြောင်းရှင်းပေးမည်လား။
ချင်းတောင်တန်းများမှ ထင်းရှုပင်များရနံ့နှင့် တောင်စွန်းများ ပေါ်တွင် ခရမ်းရောင် အပြာရောင်အကွေ့အကောက်များနှင့် ချယ်သထားလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ မြင့်မားသောတောင်များတွင် မိမိလူမျိုးစုများနှင့်အတူ တစ်သီးတစ်ခြားစီငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ လူမျိုးစုစစ်ဆင်ရေးသည် လူမျိုးစုများအတွက် နယ်မြေများကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းအများစုသည် ၎င်းတို့၏နယ်မြေများကို ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ စနစ်ကို ကျင့်သုံးကာ စီမံခန့်ခွဲကြပါသည်။ ရွာတစ်ရွာ၏ နယ်မြေများကို တောများ၊ ထင်းခုတ်တောများနှင့် ရွာမြေများ ပါဝင်သော ‘လောပေး’ [နယ်မြေများ] များအဖြစ် အကြီးအကဲမှ အပိုင်းများခွဲခြားကာ ဓလေ့ ထုံးတမ်းဥပဒေအနေဖြင့် အလေးထားလိုက်နာကြပါသည်။ မြေကွက်များကို တစ်ဦးတစ်ယောက် တည်းပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ခြံစည်းရိုးကာရံကာ အတိအကျတိုင်ငးတာသတ်မှတ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။ ဗြိတိသျှ အစိုးရ လက်အောက် မရောက်ခင်အထိ ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် နေထိုင်ရခြင်းမှာ အများစုက သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယာမြေများတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးသော လူမျိုးစုအသိုင်းအများသည် ဘေးချင်းကပ် အပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိပ်သိမ်းခြင်း၊ စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး အခြား မြေကွက်အသစ်သို့ ရွေ့ပြောင်းကာ မြေအသားကျစေခြင်းဖြင့် ရွေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ကို ကျင့်သုံးကြပါသည်။ လယ်သမားများ၏ ချင်းရိုးရာလယ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပါဝင်သည့် ပုံပြင်အများစုတွင် ယင်းရွေ့ပြောင်း တောင်ယာစနစ်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြောဆိုကြပါသည်။
သို့သော် ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ပုဂ္ဂလိကလယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို စက္ကူဖြူပေါ်တွင် တရားဝင်တံဆိပ်တုံးခပ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် မည်သူက မည်သည့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ညွှန်းပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းဖော်ညွှန်းချက်ကို နေရာတိုင်းတွင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တစ်ဝိုက်တွင် ရွာအများစုသည် မြေယာစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေသေးသော်လည်း အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေများရှိကြပါသည်။ သို့သော် ၎င်းရိုးရာမြေပိုင်ဆိုင်မှုသည် မကြာခင်အချိန်အတွင်း နှောင့်ယှက်ခြင်းခံရတော့ မည်ဖြစ်သည်။
Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law (VFV) ကို ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ VFV အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မြေများအားလုံးကို ၆လအတွင်း စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်သည် ဟုဆိုထားသည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက ၄င်းတို့သည် မိမိနယ်မြေအပေါ် ကျူးကျော်နေထိုင်သူ တရားခံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
မြေပိုင်ရှင် ဒေ့ချွန်းအဆိုအရ ၄င်းမြေကို ၁၉၉၂၊ ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် အသိမ်းခံရပါသည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် ၄င်း၏ မိဘများမှ မြေဧက ၁၉၅ ဧက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းထံလွှဲပြောင်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ၄င်းအမည်နှင့် ၁၅ ဧကသာ ကျန်တော့ပါသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ဒေါသထွက်ပြီး လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မိမိတို့၏ ခြေဖဝါးအောက်မှ နယ်မြေများ အသိမ်းခံရသူများ ကလည်း ဆန္ဒပြခြင်းတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ချင်းမြေပိုင်ရှင်များသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သော နေပြည်တော် သို့ ၁၄ ကြိမ်သွားရောက်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ဟာခါးမြို့ အဓိကလမ်းများပေါ်တွင် ချီတက်ကာ မြေများသိမ်းဆည်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
1. & 2. ဒေါ့ချွန်းမှ ၄င်းမိသားစုမြေမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
3. ဒေါ့ချွန်းမှ ၄င်းမိသားစုမြေမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းတွင် တရားဝင် ဗြိတိန်တံဆိပ်ခေါင်း ရိုက်နိုပ်ထားသည်ကို ပြသရန် သူသည် လက်မှတ်အား အလင်းဘက်သို့ စောင်းထားပါသည်။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
အခြေအနေများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း ၄င်းတို့ပိုင်မြေများကို အစိုးရ အရာရှိများမှ မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချခြင်းကြောင့် ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်ဟု ဒေါ့ချွန်းမှ ဟားခါးရှိ ၎င်း၏နေအိမ်တွင် နွားသားရေထိုင်ခုံပေါ်၌ ရေနွေးကြမ်းသောက်ကာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခု မြေများကို ပြန်လည် ရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆဲဖြစ်ပြီး ထို VFV ပြင်ဆင်ချက်အတွက် ပိုမို စိတ်ပူပန်လျက်ရှိသည်။
ထိုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ၎င်းက ခါးခါးသီးသီး လက်မခံနိုင်ပါ။
VFV မြေဆိုတာ မကြားဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ သိမ်းယူခြင်း ရပ်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ချင်းပြည်မှာ သဘာဝ သံယံဇာတမရှိတဲ့အတွက် နယ်မြေတွေအပေါ်မှာ စီးပွားရေး လာလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဒေါ့ချွန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံး စာရင်းသွင်းရန်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
VFV မှ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီများမှ စွန်ပစ်မြေများကို ပြန်လည် အသုံးပြုမှုမှ ဖြစ်လာသော ဥပဒေဖြစ်သည်။ ၁၈၆၁ ခုနှစ် တွင် ဗြိတိသျှနှင့် ပြည်တွင်းလူများပူးပေါင်းပြီး ထိုစွန့်ပစ်မြေများပြန်လည် အသုံးချ တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၄င်းကို VFV စီမံကိန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲအစားထိုးခဲ့သည်။
ထို ဥပဒေအရ မြေပိုင်ရှင်သည် ၄င်းမြေကို VFV အဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့သည် မြေပိုင်ရှင်အဖြစ်အသိအမှတ်အပြုခံရမည်မဟုတ်ပါ။ နှစ်(၃၀)မြေဌားဂရမ်ကိုသာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
“ယခုမြေတွေကို VFV မြေအဖြစ် နှစ် (၃၀)အတွက်သာစာရင်းသွင်းခိုင်းနေပါတယ်။ ပြီးရင် နှစ် ၃၀ပြည့်လို့ ကျွန်တော် စာရင်းပြန်မသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် မြေတွေသိမ်းပိုက်ခံရမှာပါ” ဟု လွှတ်တော်မှ ချင်းဝန်ကြီး မို့ဖထန်က ပြောပါသည်။ ၄င်းသည်လည်း ချင်းမြေသိမ်းခံရသည့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ “ဒါဟာ ကျွန်မတို့အားလုံးအတွက် အရမ်းကို အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
VFV ပါမစ်မရသူများမှ ကျူးကျော်သူအနေဖြင့် အကျဉ်းချထားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့မျိုးနွယ်စု နေထိုင်ရာ နယ်မြေများတွင် ပုံစံ(၇)မှတ်ပုံတင်ခြင်းဟု လူသိများသော မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုအထောက်အထားမရှိကြပါ။
“ဒါဟာ ရှုပ်ထွေးပြီး VFV ကော်မတီမှလည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ”ဟု မြေယာအကြံပေး ကလန့်ဟန့် One Map Myanmar အတွက် အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြေအချက်အလက်များကို စုစည်းပေးသော ပလက်ဖောင်လည်းဖြစ်သည်။
“အခုဘာမှကို ရေရေရာရာသိထားခြင်းမရှိသေးသဖြင့် ချင်းလူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းများအနေဖြင့် ထိတ်လန့်နေဆဲပါ”ဟု ဆိုထားပါသည်။
ဥပဒေအရ လျှေက်ထားမှုများကို ပယ်ချနိုင်ပြီး ကျူးကျော်သူဖြစ်ပါက ထောင်ဒါဏ် (၂)နှစ်နှင့် မြန်မာငွေ (၅၀၀၀၀၀) (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂၄) ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ မွေးမြူရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးလွှမ်းမိုး ကျူးကျော်သူဟုထင်ရသူ မည်သူမဆိုအပေါ် အစိုးရအနေဖြင့် အရေးယူမှုများအပေါ် ကာကွယ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ “ဒီလိုမျိုး မြေယာဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အရေးယူမှုတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအပြစ်ဒါဏ်ကို ပြဌာန်းခဲ့တာပါ”လို့ Global Ground မီဒီယာကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဥပဒေ ချမှတ်မှု၏ နောက်ကွယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော သမိုင်းကြောင်းရှိပါသည်။
စစ်အာဏာပိုင်များအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မြေများကို တပ်ပိုင်မြေများအဖြစ် သိမ်းဆည်းကာ ကျယ်ဝန်းသော စစ်တန်းလျားများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ခရိုနီများနှင့် ပူးပေါင်းကာ မှိုင်းများနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများတည်ဆောက်ကာ ဒေသခံပြည်သူများအား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေပါသည်။ ယခု NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒေသခံ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ ၂၀၁၅ အထိ မြေယာနှင့် သိမ်းဆည်းမှုများ ကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
လူမျိုးစုအများစုမှလည်း NLD အာဏာရလာပါက ၄င်းတို့၏ မြေများကို ပြန်လည် ရယူနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နေကြပါသည်။
အချို့မြေများကို စွန့်ပစ်မြေများဟု စစ်တပ်မှ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျန်မြေများမှာ VFV မြေများအဖြစ် အစိုးရမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရပါသည်။ သို့သော် မြေပိုင်ရှင်များ၏ အဆိုပြုချက်များအရ လယ်သမားများအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးနေစဉ်အချိန်များတွင် စွန့်ပစ်မြေများအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် VFV မြေများဟု မှားယွင်းစွာ စာရင်းသွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းထားသော အဖွဲ့အစည်းမှ လည်း ၄င်း VFV ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်ခြင်း မရှိခင် ကနဦးအစကတည်းက ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချခဲ့ပါသည်။ ထိုဥပဒေမှ အခြားပြင်ပမှလူများကို တိုင်းရင်းသားမြေများကို ခွဲပေးချင်သည့်အတွက် ချမှတ်ထားသည်ဟု ထင်မြင်ကြပါသည်။
“မြေဧက (၃၀၀၀၀) ကျော်ကို နှစ်(၃၀) အနေဖြင့် မည်သည့်လယ်သမားအတွက်ကိုမှ ဌားရမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊ ခရိုနီများနှင့် အခြား ကြွယ်ဝချမ်းသာသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု VFVပြင်ဆင်ချက်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော statement ကို ရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါသည်။
ဟန့် မြေယာအကြံပေးမှ အစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို မိတ်ဆက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်မှာ ရှင်းလင်းခြင်းမရှိပါ။ တခြားတစ်ဖက်မှလည်း မြေမရှိတဲ့ လယ်သမားကို မြေယာ ပြန်လည် ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း နောက်ကွယ်တွင် လှည့်ကွက်များရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
ဒီ ဥပဒေကို တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မြေအသုံးပြုခြင်းမှ တားမြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် အလွန်ကျယ်ပြန့်သောမြေများ ဌားရမ်းခွင့်ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်လို့ Voice of America မှ ကမ္ဘာ့မြေအခွင့်အရေး၏ ဒုတိယဥပဒေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Ben Hardman က ဆိုထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝ သံယံဇာတများ ကြွယ်ဝပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှ ကျောက်စိမ်းထွက်ကာ ရခိုင်မှ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့နှင့် အဆီအနှစ်များ ထွက်ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင်မူ မြေယာများသာရှိပြီး အများစုမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲသော တောင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် မြေယာကြီးများ ဌားရမ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချင်းပြည်နယ်တွင် အခြေချလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ကြံရွယ်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော Land in Our Hands မှ အဲလက်စ် ထူး သည် ၎င်းဥပဒေ အခြေခံအချက်များကို ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါသည်။။ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
လယ်ယာမဲ့လယ်သမားများကို ပြန်ပေးရန်အတွက် လစ်လပ်နေသော မြေယာများကို သတ်မှတ်သည့်ဥပဒေမှန်လျှင် ထိုကဲ့သို့ ဒေသခံလူမျိုးနာမည်ခံမြေများအတွက် ရှင်းလင်းသော ကာကွယ်မှုလိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးစု ၁၃၄ စု ရှိသည့်အတွက် ထိုသို့ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ထဲတွင် အမဲလိုက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ရှင်သန်ခဲ့သည့်မှာ ရာစုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အရေးကြီးဆုံးမှာ clause 30a တွင် ဒေသခံမြေများသည် ပါမစ်အတွက် လာရောက်စာရင်း ပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါဟု ဆိုထားသော်လည်း ‘ဒေသခံမြေများ’ အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက် မရှိပါ။ မိမိ၏ဒေသခံမြေများမှာ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း ရှိမရှိ ကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် မြေပုံနှင့် မှတ်တမ်းများလည်းမရှိပါ။
Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) မှ နိုင်ငံညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုရဲလင်းမြင့်မှ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေဆိုသင်္ညမှာ လူမျိုးစုများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မြေယာများကို အစိုးရနိုင်ရန် လူအများစုပေါင်း သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေများဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြထားပါသည်။ ထိုစနစ်ကို ယခင် မြန်မာကို ဗမာဟု ခေါ်စဉ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေများဖြစ်ရ အဆိုပါဥပဒေများကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါက ၄င်းသည် တိုင်းရင်းသားမြို့နွယ်စုများ၏ တည်ရှိမှု၊ ၎င်းတို့၏ သမိုင်းနှင့် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နေထိုင်လာသော နယ်မြေများအပေါ် စော်ကားရာရောက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေယာနှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စရပ်များမှ အန္တရာယ်များပါသည်။ ကိုရဲအနေဖြင့်လည်း ချိန်းခြောက်စာများကို ရရှိခဲ့ပြီး MATA အဖွဲ့ဝင်အများအပြားမှာလည်း ၎င်းတို့၏မြေများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ မမျှတမှုကို လိုက်လံဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အကျင့်ပျက်ချစားမှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရာမှ အသတ်ခံရခြင်း သို့ အဖမ်းခံရမှုများရှိနေပါသည်။
လူမျိုးစုများ၏ အကြုံပြုချက်များ ရယူခြင်းမရှိဘဲ ရှေ့ဆက်သွားနေမည့်အစား အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ အသံကို နားထောင်နိုင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ရန် အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းသင့်သည်ဟု သူကပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ထိုစဉ် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် မြေအစုအဖွဲ့ Land Core Group မှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ရွှေသိမ်းမှ အကယ်၍ အစိုးရအနေဖြင့် အစိုးရနှင့် လူမျိုးစုများ၊ မြေပိုင်ရှင်များအကြား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် အကြုံပြုဆွေးနွေးချက်များမှ ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သော် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ငြင်းဆိုထားပါသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ မွေးမြူရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးလွှမ်းမိုးမှ VFV ပါမစ်အတွက် နိုင်ငံတဝန်း လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လအတွင်း စာရင်းပေးသွင်းသည့်အရေအတွက်ကို မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော် သူသည် “ဒါဟာ လူတွေကို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က လယ်သမားများဟာ လယ်ယာလုပ်ကိုင်နေသော်လည်း ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ပါ။ ၎င်းတို့ဟာ ကျူးကျော်သူများသာ ဖြစ်တယ်။”ဟူ၍ ပြင်ဆင်ချက်ကို ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် ပဋိပက္ခများစွာရှိပါသည်။ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်များတွင် အဆိုပါ ပဋိပက္ခများအကြား လူဦးရေ ၂၄၄၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး VFV အစီအစဉ်ကြောင့် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း UNမှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ချင်းအနောက်ပိုင်း ရခိုင်နှင့် ထိစပ်သောဒေသများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။
ယခုနှစ်အတွင်းတွင် ထိုသို့ မြန်မာစစ်တပ်မှ ရိုဟင်ဂျာ 700,000 ကျော်ကို ဘင်္ဂလာဒေသသို့ ပြန်လည် ထွက်ပြေးစေပြီး မြန်မာစပ်တပ်နှင့် အာရကန်ကြား clashes အတိုက်အခံဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့အနီးအနားသို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ချင်းဒုက္ခသည် ၂၀၀ခန့်သည် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေကြရပါသည်။
ထိုသို့ ဒေသတွင်းမှ လူများအနေဖြင့်လည်း ပါမစ်လျှောက်ထားရန်အတွက် နေရပ်ပြန်၍မရသေးပါ။ ၎င်းတို့သည် အကြမ်းဖက်မှုများကြားမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့်အတွက် ပြန်လာသည့်အခါမျိုးတွင်လည်း ၄င်းတို့တွင် မြေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အထောက်အထားပြစရာရှိမည်မဟုတ်ပါ။
VFV မြေကို စာရင်းသွင်းထားသူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ တိုင်းရင်းသား (၇)ပြည်နယ် ရှိပါသည်။
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ ရွှေးကောက်ပွဲအတွက် ကတိပေးခြင်းများတွင် လယ်သမားများအတွက် တရားမျှတမှုပါဝင်ပါသည်။ ထိုသို့ လယ်မြေများကာကွယ်ရေးနှင့် လယ်ယာသိမ်းကိစ္စရပ်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နယ်မြေငြိမ်းချမ်းရေး မိန့်ခွန်းများ national peace talks တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် လူများအနေဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက မိမိပိုင်နယ်မြေများအပေါ် ကျူးကျော်သူများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည့်အရေးကြောင့် နိုင်ငံတ၀န်းတွင် လူမျိုးစုများစွာ၏ ကျယ်လောင်သော ငိုကြွေးသံများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ချင်းလယ်သမား ရမ်ဖန်မှ ဒါဟာ ဥပဒေ အလိမ်အညာတစ်ခုပါ။ ဥပဒေအကြောင်းပြပြီး အစိုးရမှ မြေသိမ်းနိုင်အောင် လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါသည်။
မြေပိုင်ရှင်မှ ပါမစ်လျှောက်ပါကလည်း မြေအပိုင်ရမည်မဟုတ်ဘဲ နှစ်(၃၀)ဌားရမ်းခြင်းသာ ဖြစ်သွားပြီး ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပယ်ဖျက်သကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါမည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသည် VFVဥပဒေမှာ [ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ချက်တွင် ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ခြင်းကြောင့်] ချင်းပြည်နယ်အတွက် မဟုတ်ဟု ဆိုထားသော်လည်း စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမပြုပါက မြေကို ဆုံးရှုံးသွားမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
တရားဥပဒေအရ ကျွမ်းကျင်သူများမှလည်း ထိုဥပဒေမှာ လစ်ဟာချက်များရှိနေပြီး ပြင်ဆင်ချက်အောက်တွင် မြေတစ်ကွက်အတွက် လူနှစ်ယောက်က တိုက်ဆိုင်လျှောက်ထားခဲ့သော် အငြင်းအပွားဖြေရှင်းမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါဟုဆိုထားပါသည်။
တင်မေးလာ နာမတီအဖွဲ့မှ မြေအခွင့်အရေး မြန်မာဒါရိုက်တာမှ ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံမြေဥပဒေအောက်တွင် ၂၀၁၆ မှ ထုတ်ခဲ့သည့် National Land Use Policy ဥပဒေအတိုင်း အစိုးရမှ ဤဥပေဒေကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး များစွာသော လူများအကြံပြုချက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုဥပဒေမှ လက်ခံခြင်းမပြုခဲ့ရပါ။
သူ၏အဖွဲ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူအများ ဤဥပဒေပြောင်းလဲမှုကို မည်မျှသိသလဲဟု စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ လူ ၂၉၀ ကို မေးမြန်းရာမှ ၇၂% မှာ သိရှိခြင်းမရှိပါ။ ပြောင်းလဲမှုကို သိရှိသော်လည်း အသေးစိတ်သိရှိထားခြင်းမရှိလဲ VFV ဥပဒေအကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားခြင်းမရှိပါ။ ဒေသခံနယ်မြေများကို VFV ပြင်ဆင်ချက်တွင် ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းကို ၁%မျှသာ သိရှိကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၄င်းတို့မှ ဖိအားပေးခံရပြီး မြေပါပစ်အတွက် လျှောက်ထားရာတွင်လည်း အားနည်းဟာ မြေပိုင်ရှင်အခွင့်အရေးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ထောင်ချခံနိုင်ရပါသည်ဟု Ben Hardman Voice of America. ၏ကမ္ဘာ့မြေအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက် ဥပဒေရေးရာ ဒါရိုက်တာက ဆိုထားပါသည်။
VFV မြေအတွက် မတရားခံရသူများမှ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ၄၁ အဖွဲ့အစည်းသို့ စာပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီး VFV မြေထိန်းချုပ်မှုကော်မတီမှ ထိုဥပဒေကို အတွက် မတရား ထောင်ချခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြေယာပြန်ရရှိရေးအတွက် ရှိပြီးသား ဥပဒေ VFV ဥပဒေ ကဲ့သို့ ရှိပြီးသား ဥပဒေများအပေါ် ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်နေပါက ရှင်းလင်းချက်များကို ရယူရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ဟု မြန်မာ့ ဗဟိုတာဝန်သိ စီးပွားရေး Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) ပြည်တွင်း မြေယာဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်မှုများအတွက် အဆိုပြုချက်တွင် statement. ဆိုထားပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ICESCE နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအခွင့်အရေးအဖွဲ့နျင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ ပြည်တွင်းအဆင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ သတ်မှတ်ထားပေးပြီးဖြစ်သည်။
သိုသော် MCRB မှ VFV အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ မြေဥပဒေများမှာ တိုင်ကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဟုဆိုထားပါသည်။
အစိုးရသို့ letter အိတ်ဖွင့်စာပို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းမှ “ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှိ၏ လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်ရန် ဤဥပဒေဖော်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်” ဟုပြေကြားခဲ့ပါသည်။
VFV ဥပဒေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မြေအသုံးပြုသူများကြား ပြဿနာကိုလည်း ဖန်တီးလာနိုင်ပါသည်ဟု ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများမှ ဆိုထားပါသည်။
သဘာဝသံယံဇာတာများနင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဓါတ်သတ္တုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကပို့သောစာတွင် “ဤဥပဒေကြောင့် အခြားဒေသများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ရာ (VFVဥပဒေအပါအ၀င်)ရှိပြီးသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုကို ရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်နိုင်ပါ”ဟု ဆိုထားပါသည်။
မြေယာများအတွက် ဆန္ဒပြလျက်ရှိသူ ဘယ်သမား ဒေါ့ချွန်းမှ VFV မြေပိုင်စနစ်ကြောင့် VFV နယ်ဖြစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မိမိတို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေထိုင်ခဲ့သော ယာမြေများ ဖြစ်သည့် သစ်တောများ၊ ရေကြောင်းလမ်းများ အတွင်းသို့ ၄င်း၏ နောင်လာနောင်သားများ ၀င်ရောက်ခွင့် ရုတ်တရက် ပိတ်ပင်ခံရမည် ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို လွန်ခဲ့သော လက ကျင်းပခဲ့ပြီး အကပွဲနှင့် နပမ်းသတ်ပွဲမတိုင်ခင် ဒေါ့ချွန်းနှင့်အခြားချင်းလယ်သမားများ အဖွဲ့အစည်းမှ အခမ်းအနားကို အားပေးရန်အတွက် ဟားခါးမြို့သို့ ပျံသန်းလာသော သမ္မတဖြစ်သူနှင့် စကားပြောဆိုချင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်သာရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ့ချွန်းအနေဖြင့် ချင်းအမျိုးသားဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားရင်း မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်မြေများအတွက် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မှာမှ လက်လျှော့မည်မဟုတ်ဟု ဆိုထားပါသည်။
မြန်မာ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်မှလည်း ချင်းအမျိုးသားနေ့ပွဲကို တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါသည်။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
ချင်းလူမျိုးများသည် ၄င်းတို့၏ ယာမြေများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ဆက်နွယ်မှုအတွက် တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူကြပါသည်။ ချင်းလူငယ်များ ဟားခါးတွင် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပနေ့ပုံကိုကြည့်ပါ။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
ဟားခါးမြို့မှ ချင်းအမျိုးသားနေ့။ ချင်းပြည်နယ်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ နေထိုင်ရာ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
ဟားခါးမြို့မှ ရွာခံလူကြီးများသည် ဘိုးဘေးဘီဘင်များအား ဂရာပြုသောအားဖြင့် အကကို ဦးဆောင်ပြီး ကပြဖျော်ဖြေကြပါသည်။ (ဟားခါး၊ မြန်မာ၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉)
Instagram post 2144079482105984111_7144963427